Israa'iil ayaa mamnuucday dadka ka imaanaya todobo waddan oo ku yaalla koonfurta Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Israa'iil ayaa mamnuucday dadka ka imaanaya todobo waddan oo ku yaalla koonfurta Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Botswana Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • Wararka Lesotho • Mozambique Breaking News • Wararka Namibia • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Zimbabwe War Deg Deg Ah
Ballaarinta liiska 'cas' waxay ahayd lama huraan sababtuna waxay ahayd ogaanshaha saynisyahannada Koonfur Afrika ee nooc cusub oo COVID-19 ah oo ka socda gobolka koonfurta Afrika, sida uu sheegay Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa maanta ku dhawaaqay in Koonfur Afrika iyo lix waddan oo Afrikaan ah lagu daray liiska dalalka 'casaanka' ee Israa'iil.
Kala duwanaanshiyaha - oo loo yaqaan B.1.1.529 - wuxuu leeyahay "urur aan caadi ahayn" ee isbeddellada, kuwaas oo khuseeya sababtoo ah waxay ka caawin karaan inay ka baxsadaan jawaabta difaaca jidhka oo ay ka dhigaan mid aad u faafa, saynisyahano ayaa u sheegay wariyeyaasha shir jaraa'id oo Koonfur Afrika.
Kadib kulan ay yeesheen Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Israa'iil Naftali Bennett, todoba waddan oo Afrikaan ah - Koonfur Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia iyo Eswatini - ayaa lagu daray liiska wadamada "casaan", ama wadamada aan loo ogolayn in ay u safraan Israa'iiliyiinta, ilaa ay fasax gaar ah ka helaan wasaaradda caafimaadka Israel.
Israa'iiliyiinta ka soo laabanaya dalalkaas waxaa looga baahan doonaa inay ku qaataan inta u dhaxaysa 7-14 maalmood hoteel karantiil ka dib markay yimaadaan.
Booqayaasha dalalkan Afrikaanka ah ayaan loo ogolaan doonin inay galaan Israa’iil sidoo kale, Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay.
Israa'iil ayaa diiwaangelisay 1.3 milyan oo kiis oo la xaqiijiyey oo ah COVID-19 iyo in ka badan 8,000 oo dhintay tan iyo markii uu cudurku bilaabmay.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Caafimaadka ee dalka, kaliya 57% Israa'iilDadka 9.4 milyan ah ayaa si buuxda loo tallaalay.